आज टिकाको दोस्रो दिन , पापाङ्कुशा एकादशी
आज टिकाको दोस्रो दिन , पापाङ्कुशा एकादशी यसको महत्त्व के हो ? के गर्नु पर्छ यस दिन ?
आश्विन ३०, २०७८
धरान : आज दसैंको टीकाको दोस्रो दिन पापाङ्कुशा एकादशी ।
विजया दशमीको दिनमा टिका लगाउन छुटेकाहरूले आज पनि आफ्ना मान्यजन र आफन्तहरूबाट टीका थापेर आर्सीवाद ग्रहण गरिरहेका छन् । यसरी टिका ग्रहण गर्ने क्रम कोजाग्रत पूर्णिमासम्म जारी रहने गर्दछ ।
दशैंमा टाढा–टाढाका आफन्तजनहरू पनि समयमा नै सके सम्म सबै आफन्तहरू कहाँ पुग्ने गर्दछन् । यसरी टिका लगाउने क्रम कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन सम्म चलिरहन्छ ।
आज शाश्वत सनातन धर्मावलम्बीहरू एवम् त्यस अन्तर्गतका वैष्णवहरूको महत्त्वपूर्ण दिन पापाङ्कुशा एकादशी ।
पौराणिक महाभारत कालको एक समयमा धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न गर्नुहुन्छ “ हे भगवान् ! आश्विन शुक्ल एकादशीको नाम के हो ? अब तपाईँ कृपा गरेर यसको विधि तथा फल भन्नुहोस् ।“ भगवान् श्रीकृष्णले भन्न लाग्नु भयो– हे युधिष्ठिर ! पापहरूको नाश गर्ने यस एकादशीको नाम पापाङ्कुशा एकादशी हो । हे राजन ! यस दिन मनुष्यले विधिपूर्वक भगवान् पद्मनाथको पूजा गर्नु पर्दछ ।
मनुष्यहरूलाई धेरै वर्षसम्म कठोर तपस्याबाट जो फल मिल्दछ, त्यो फल भगवान् गरुडध्वजलाई नमस्कार गर्नाले प्राप्त हुन जान्छ ।
विष्णु भगवानका नामको कीर्तन मात्रले संसारका सबै तीर्थहरूका पुण्यको फल मिल्दछ । जो मनुष्य लक्ष्मी पति विष्णुको शरणमा जान्छन्, उनीहरूले कहिल्यै पनि नरकको यात्रा गर्नु पर्दैन ।
हे राजन ! जो मनुष्य वैष्णव भएर शैव एवम् शैव भएर वैष्णवको निन्दा गर्दछन्, उनीहरू अवश्य यस पापले नरकमा प्रवेश गर्दछन् । सहस्र अश्वमेध यज्ञहरूबाट जुन फल प्राप्त हुन्छ, त्यसको फल एकादशीको व्रतको सोह्रौँ भागको बराबर पनि हुँदैन ।
तीनैलोकमा एकादशीको व्रतको तुलनामा अरू कुनै पुण्य छैन । एकादशीको व्रत पश्चात् मात्र मनुष्य पापबाट मुक्त हुन सक्छ । आश्विन मासको शुक्ल पक्षको यस पापाङ्कुशा एकादशीको व्रत जो मनुष्यले गर्दछन्, तिनीहरू अन्त समयमा हरि लोक प्राप्त गर्दछन् तथा समस्त पापहरूबाट मुक्त हुन जान्छन् । श्रीकृष्ण भन्नु हुन्छ “हे राजेन्द्र ! यो एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्ययता, सुन्दर स्त्री तथा अन्न र धन दिने एकादशी हो ।
एकादशीको व्रत बराबरको फल अन्य दान पुण्य गर्दा प्राप्त हुँदैन । एकादशी व्रतका सामुन्ने गङ्गा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र र पुष्कर पनि पुण्यवान् छैनन् ।
एकादशीको व्रत गर्नाले मनुष्यलाई सजिलै विष्णु पद प्राप्त हुन्छ भन्ने शास्त्रोक्त वचन रहेको छ । त्यसैले यस एकादशीले हाम्रा पापहरूलाई अङ्कुशले तानी छिनाएर फाल्ने भएकाले यसलाई पापाङ्कुशा भनिएको हो ।
यस वर्षको गोधुली कप फुटबल पुस .....
केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी द .....
कम्युनिस्टलाई पराजित गर्न काँग .....
धरान-१४ मा दोस्रो वडाध्यक्ष रन .....
धरानमा तीनपाने रक्सी र कालो बङ .....
सुनसरीमा ७ जना सहित प्रदेश १ म .....
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा दोस्रो .....
डेढ लाख नगद सहित होटलमा तास खे .....
यस वर्षको गोधुली कप फुटबल पुस २४ गत ...
केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने न ...
कम्युनिस्टलाई पराजित गर्न काँग्रेस ...
धरान-१४ मा दोस्रो वडाध्यक्ष रनिङ कप ...
धरानमा तीनपाने रक्सी र कालो बङ्गुरल ...
सुनसरीमा ७ जना सहित प्रदेश १ मा ४० ...
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा दोस्रो पटक ...
डेढ लाख नगद सहित होटलमा तास खेल्दै ...
स्वास्थ्य केन्द्र चतरालाई स्वास्थ्य ...
मोरङ काँग्रेस सभापतिमा पुनः निर्वाच ...
समाजवादी विद्यार्थी युनियनले क्याम् ...
धरानमा ३ जना सहित प्रदेश १ मा ३४ जन ...
मोरङ र भोजपुरमा भएका घटनामा २ जनाको ...
भाइरल गायिका समीक्षा अधिकारीको मेरो ...
आमा र बहिनीको कुटाइबाट राजेन्द्रको ...
हङकङ नेपाली महासङ्घको अध्यक्षमा रित ...
रामधुनीमा भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनाम ...
नेपाली काँग्रेस सुनसरीको सभापतिमा क ...
ओलीले घोषणा गरेको ३०१ जना केन्द्रीय ...
'मिस ग्राण्ड नेपाल २०२१' को ताज निस ...
प्रदेश १ मा २४ जनामा कोरोना सङ्क्रम ...
सानो कुरालाई अतिरञ्जित गरेर मेरो चर ...
झापामा जोगियो सिटौलाको साख, थेबेको ...
फर्जी मत हाल्न खोज्दा क्षेत्रीय सभा ...
झापाको बिरिङ्ग पुलमा भएको बस दुर्घट ...
धरानका दुई युवा लागुऔषध सहित विराटन ...
पाँचौँ बाह्रखरी गल्फ धरानमा हुने ...
मोरङ काँग्रेसको सभापतिमा ३ उम्मेदवा ...
मेरो डान्स कप र मेरो भ्वाईस कप युएस ...
छथरे समाजको पाँचौँ अधिवेशनबाट नयाँ ...
सामाजिक विकास मन्त्री यादवद्वारा इल ...
नेकपा माओवादी केन्द्र धरानको बन्द स ...
जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङका अहेवको ...
गच्छदारको स्वार्थ अनुसार सुनसरी ३ म ...
नेकपा (माओवादी केन्द्र) धरानको बन्द ...